Mind Games နဲ့လာမယ့် လီဗာပူးနည်းပြကလော့ကစားကွက်ကို ကာကွယ်ဖို့ ဖာဒီနန်ပြောပြီ – FBV SPORT NEWS
Mind Games နဲ့လာမယ့် လီဗာပူးနည်းပြကလော့ကစားကွက်ကို ကာကွယ်ဖို့ ဖာဒီနန်ပြောပြီ
Mind Games နဲ့လာမယ့် လီဗာပူးနည်းပြကလော့ ကစားကွက်ကို ကာကွယ်ဖို့ ဖာဒီနန်ပြောပြီ…
မန်ချက်စတာယူနိက်တက်ဟာ ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ် (၁၈) ကို လီဗာပူး အသင်းရဲ့ အန်ဖီးလ်ကွင်းမှာ လာမယ့် ၁၇ ရက်နေ့မှာ ကစားဖို့ရှိနေပါတယ်….
လီဗာပူးအသင်းရော ယူနိက်တက်အသင်းရောအတွက် ဒီပွဲဟာ အရမ်းအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကို အားလုံးသိထားကြပြီးသားဖြစ်မှာပါ…ယူနိက်တက်အတွက် ဇယားထိပ်မှာ ဆက်နေဖို့ အနိုင်ရဖို့ လိုသလို လီဗားပူးလ်ဟာလည်းဇယားထိပ်တက်ဖို့ အနိုင်ရဖို့ လိုနေပါတယ်…
ယူနိက်တက်တိုက်စစ်မှူးတယောက်ရဲ့ဇနီး ကိုဗစ်စည်းမျဉ်းချိုးဖောက်သဖြင့် လီဗာပူးပွဲ လွဲချော်တော့မည်
အဲ့ဒါကြောင့် ဒီပွဲဟာ နည်းပြနဲ့ကစားသမားတွေအားပြိုင်မယ့်ပွဲလို့တောင် မှ ပြောလို့ရတယ်လို့ အင်္ဂလိပ်ဘောလုံးမီဒီယာတွေက တင်စားပြောဆိုနေကြပါတယ်…
ယူနိက်တက် Legend ဗဟိုခံစစ်မှူးဟောင်းဖြစ်တဲ့ ရီယိုဖာဒီနန်က ဒီပွဲမှာ လီဗားပူးလ် နည်းပြ ကလော့ဟာ Mind Games တွေ သုံးနိုင်တယ် ဆိုတဲ့အကြောင်းကို Metro Sport မှာ ယခုလိုရှင်းပြထားပါတယ်….
ဖာဒီနန်က ” ကျနော် တို့ ယူနိက်တက်ဟာ အဓိကပွဲစဉ်တပွဲကို ယှဉ်ပြိုင်ရတော့မှာဖြစ်လို့ အဖက်ဖက်ကနေ ပြင်ဆင်ထားသင့်ပါတယ်..လက်ရှိယူနိက်တက်အသင်းဟာ တခြား ကြောက်လန့်စရာဘာမှမရှိပေမယ့် ကလော့ရဲ့ Mind Games တွေတော့ကြောက်စရာကောင်းနိုင်ပါတယ်..
ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ သူတို့ကစားသမားတွေဟာ ပင်နယ်တီမရရအောင် ဖန်တီးတာတွေ ယူနိက်တက်ကစားသမားတွေရဲ့ တိုက်စစ်ကို ကြမ်းတမ်းစွာ ဖျက်ထုတ်ပြီး ဒိုင်ကို စောဒကတက်တာမျိုးတွေ Var စနစ် ရဲ့ အားနည်းချက်နဲ့ ယူနိက်တက်ကစားသမားတွေကို အနီအဝါတွေပြအောင် လုပ်လာနိုင်ပါတယ်….
ဘာဘဲဆိုဆို ကျနော်တို့ ယူနိက်တက်ကစားသမားတွေ စိတ်ဓာတ်မာဖို့တော့လိုမယ်လို့ ကျနော်အကြံပေးချင်ပါတယ်….ကလော့ရဲ့ Mind Games အစီစဉ်ထဲမှာမျောမသွားဖို့ ဂရုစိုက်ကြပါလို့ ပြောချင်ပါတယ်..” ဟုပြောသွားခဲပါတယ်…
Rka(FBV Sport News)
ပယ်နတီရအောင်သင်ပေးတဲ့ အကြောင်းပြောခဲ့တဲ့ ရက်ဖို့ကို မော်ရင်ဟို တုံ့ပြန်